जि.ओ अटोमोवाईल्सको फोर्ड फ्रीस्टाईल लञ्च - Nari Post
You are at :Home»नारी पोष्ट»जि.ओ अटोमोवाईल्सको फोर्ड फ्रीस्टाईल लञ्च
अटो भेन्चर प्रा.लि. पोखराले आफ्नो नयाँ प्रस्तुति अल न्यू फोर्ड फ्रीस्टाईल कूल क्याप्याबल र कनेक्टेड यूटिलिटी भेहिकल ( सीयूभी ) लाई लोकेसन लञ्च गरेको छ । प्रा.लि.ले लोकेसनको बुधबार पोखरामा लञ्च गरेको हो । जि.ओ अटोमोबाईल्सका प्रतिनिधि विजय थापाले फोर्ड फ्रीस्टाईलमा क्रसओभर मात्र नभएर भुरपूर्ण विशेषताहरु भएकाले सबै नेपालीले रुचाउने बताए । उनका अनुसार फोर्ड फ्रीस्टाईलमा नविनतम प्रविधि, सुरक्षा र सुविधाका साथ ९६ पीएस पावर दिने ईन्जिन, १९० एमएम ग्राउण्ड क्लियरेन्स, ६ एयरव्याग र साईन्स ३ ईन्फोटेनमेन्ट सिस्टम पाईन्छ ।
फोर्डले ल्याएको यो नयाँ सी.यू.भि ले नेपालमा ह्याचव्याक भन्दा हल्का ठूलो गाडी रुचाउने ग्राहकहरुमध्ये बढ्दो माग पूर्ति गर्ने आशा फोर्डले राखेका छन् । ‘‘डु एभ्रिथिङ्ग एण्ड रेग्रेट नोथिङ्ग’’ नारा राखिएको फोर्ड फ्रीस्टाईल नयाँ डिजाइन र उच्च कार्यक्षमतायुक्त रहेको थापाले बताए । कूल क्याप्यावल र कनेक्टेड फ्रीस्टाईलले सबै क्षेत्रमा रहेका ग्राहकलाई आकर्षित गर्दै आफ्नो बजारको माग बढाउने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ । आकर्षित डिजाइन सहित एस.यू..भी को स्वभाव आउने फोर्ड फ्रीस्टाईलमा भिन्न खालको थ्री डिमेनजसनल मेस को ग्रील राखिएको छ । गाडीमा भएको फ्रन्ट बम्परमा स्कीट प्लेट र फेसिया सेक्सन जोडिएको छ जसले फ्रीस्टाईलको डिजाइनलाई अझै आकर्षित बनाएको कम्पनीको दाबी छ ।
फ्रीस्टाईलमा रहेको टीआईभीसीटी पेट्रोल इन्जिन सानो, हलुका र शक्तिशाली हुनका साथै कम इन्धन प्रयोग गरी राम्रो माइलेज प्रदान गर्ने थापाले बताए । यसको ९ पीएस पावर यो सेगमेन्टको सबैभन्दा बढी हो । छ वटा ईयर वाग्स र ईलेक्ट्रोनिक स्टाविलिटी भएको फोर्ड फ्रीस्टाईल ग्राहकको सुरक्षाको पनि ध्यान राखेर बनाएको छ । फोर्ड फ्रीस्टाईलमा फोर्डको ईन—कार इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, साईन्स ३ र ६.५ ईन्च टचस्क्रीनको पनि व्यवस्था भएकोले गाडी चालकलाई आफ्नो स्मार्टफोनसँग पूरा कनेक्ट गाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
भारततर्फ लैजान लागिएका चार युवतीको सीमा नाकाबाट उद्धार
naripost 29 Nov 2018
naripost 16 Nov 2017
अचम्म ! पोखरामा १२ बर्षिया किशोरीले बच्चा जन्माईन्
naripost 13 Dec 2018